Filtrer les éléments par date : jeudi, 21 décembre 2017
jeudi, 21 décembre 2017 22:40
Université d’Antananarivo: Toutes les activités pédagogiques suspendues jusqu’à nouvel ordre
Ceci suite à la grève des enseignants chercheurs et chercheurs enseignants membres du syndicat SECES section Antananarivo.
jeudi, 21 décembre 2017 09:22
Sambava: Olona voarohirohy nahatratrana basy nefa nivoaka sahady
Nikoropaka ny mponina tao Tsararivotra raha vao nahita ny olona voarohirohy ho mpanamboatra sy mpivarotra basy ary nahatratrana basy ihany koa nefa nivoaka sahady.
Ny 10 novambra 2017 no nanolorana azy ireo tany amin’ny Fitsarana Ambaratonga voalohany Antalaha, taorian’ny famotorana nataon’ny Zandarimaria teto Sambava, rehefa nahatratrarana basy maro karazany, miaraka amin'ny fitaovana fanamboarana izany tao Tsararivotra Sambava izy ireo.
Iray volana aty aoriana dia tafaverina sahady eny anivon’ny fiara-monina ireo voarohirohy, ka nanaovana fety bavata.
Ny Kapiteny Maguy Mahamandina, avy amin’ny kaompanian’ny Zandarimaria moa nanambara fa “efa vita ny asanay avy amin’ny Zandarimaria satria efa natolotray ny Fitsarana ny raharaha, koa raha tsy ahitana fandikan-dalàna hafa indray tsy mihetsika izahay”.
jeudi, 21 décembre 2017 08:59
Sambava: 900 Ariary kapoakan’ny fotsimbary
Tsy mazava amin’ny mpanjifa ny antony nampiakatra ny vidin’ny vary aty amin’ny Faritra SAVA ka diso kajikajy ny maro, satria raha i SAVA dia ao anatin’ny vanim-potoana tokony hidinan’ny vidim-bary amin’izao fotoana izao satria manomboka matoy ny vary.
Tafakatra 180.000 Ariary ny iray gony ary 900 Ariary ny iray kapoaka amin’ny vary gasy mamoriaka, fa ireo vary be vato no 850 Ariary ny kapoaka ary 170.000 Ariary ny iray gony.
Manahy ny mbola hiakaran’ny vidim-bary hatrany ny mponina aty Sambava ka samy manontany tena hoe, ho aiza ihany ny vahoaka madinika izay mitrongy vao homana ?
Accident RN4: Coup de gueule d'un proche d'une personne accidentée
"Ny zandriko vavy tokana sy ny vadiny dia isan'ireo voyageurs tao anatin'ilay Taxi-brousse Cotisse broyée par le camion fou."
Naratra mafy ry zareo, ma soeur doit rester immobilisée, elle souffre de son bassin et de son fémur - Soutirée du bas de son siège, elle a encore tenu la main du chauffeur pour l'encourager, satria ilay chauffeur tsy nety novonjena raha tsy novonjena aloha ireo olona tafahitsoka teo aloha niaraka taminy dont un dadabe sy ireo zafikeliny.
Mbola nisy zazavavy naratra sy feno rà ny lohany nefa mbola niresaka.
Tsy nisy olona maty teo fa araky ny eritreretiny dia nandritry ny voyage nitondràna azy ireo no nahafaty ny sasany.
Ilay chauffeur tsy nisy coquille akory fa pick-up no nitondrana azy nitontontontona sy nivadibadika.